प्रतिक्रिया - साप्ताहिक
सरकारी जग्गा, खासगरी सरकारले मुआब्जा तिरी अधिग्रहण गरेको जग्गा, भूमाफिया र शक्तिशाली व्यत्तिहरूले आफ्नो नाममा लिएका प्रमाण भेटिएपछि सरकारी जग्गा कहाँ–कस्तो अवस्थामा छन् विवरण दिनु भनेर अर्थ समितिबाट मागेका थियौं, तर सम्बन्धित कार्यालयले आजसम्म विवरण दिएन– कथा डरलाग्दा छन् । पुरा पढ्नुहोस्
नेपालमा कानुन मिच्दा ठूलो मान्छे भएको भान पर्छ । (लुकिछपी ट्रान्स पार्टी) देशको कानुनविपरीत बारम्बार ट्रान्स पार्टी हुनु भनेको राज्यलाई चुनौती हो । कानुनलाई हातमा लिएर यस्तो व्यवसाय गर्नेहरूविरुद्ध कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ । खुकुलो कानुन कार्यान्वयनका कारण पटक–पटक यस्ता पार्टी हुने गरेका छन् । यदि ट्रान्स पार्टी सही हो भने कानुन बनाएर व्यवस्थित गरे भयो नि । पुरा पढ्नुहोस्
आयुशा श्रेष्ठ, चैत्र ९, २०७५
इन्जिनियरले बाटो बनाउँदा जसरी नक्सा बनाई एउटा सुन्दर बाटोको परिकल्पना गरी बाटो निर्माण गर्छन् त्यसैगरी विद्यार्थीको उज्यालो भविष्य परिकल्पना गरी एउटा सुन्दर बाटो बनाइदिने प्रेरणाका स्रोत हुन्— शिक्षक र त्यो बाटोमा हिँडी आफ्नो भविष्य उज्ज्वल बनाउने व्यक्ति हो— विद्यार्थी । पुरा पढ्नुहोस्
पशुपति शर्माले भनेको भन्दा बढी बेथिति छ देशमा, अनि गीत चैं रामराज्यको गाउनुपर्ने ? सिर्जनात्मक अभिमत राख्न पाउने कि नपाउने ? पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , माघ ५, २०७५
देशको नाम राख्नेहरूले नै गुमनाम जीवन बिताउनुपर्ने बाध्यता छ । (विश्व विजेता) जो देशकै ढुकुटी रित्याउने काममा अगाडि छन् तिनकै अनेक ढंगले सम्मान गरिन्छ हाम्रो नेपालमा । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , पुस २८, २०७५
विष्णु माझीको वास्तविक कुरा सञ्चार माध्यममा आउनैपर्छ । आजको जमानामा कुनै पनि नारी भूमिगत बस्न चाहँदैनन् । विष्णु माझी भूमिगत हुनुको कारण सुन्दमणि अधिकारी नै हुनुपर्छ । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , पुस २०, २०७५
साप्ताहिकले प्रस्तुत गर्ने लेख–रचना सधैं अरूभन्दा फरक हुन्छन् । (फ्ल्यास ब्याक–२०१८) यस पटक सन् २०१८ को समीक्षा साह्रै राम्रो तरिकाले गरिएको छ । विश्व घटनाका सम्बन्धमा चासो राख्नेहरूका लागि हरेक सामग्री ज्ञानमूलक छन् । यस्ता विषयवस्तुलाई नियमितता दिँदै जानुपर्छ । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , पुस १४, २०७५
उपयुक्त समयमा (हनिमुन रोमाञ्च) सही विषय प्रस्तुत भएको छ । चर्चित व्यक्तिहरूको हनिमुन रमाइलो लाग्यो । हनिमुन जाने जोडीमा सिर्जना हुन सक्ने समस्या केलाएर समाधानको उपायसमेत दिएकाले धेरै मानिस यसबाट लाभान्वित हुन सक्छन् । पुरा पढ्नुहोस्
कफी धेरै पिउनु उपयुक्त हुँदैन । (रेखा थापाको कफी मोह) । अभिनेतृ रेखा थापा कफीकी पारखी रै’छिन् । दिनमा एक कप पिउनु ठीकै भए पनि धेरै पिउनु हुँदैन । मेरो जमानाकी एक स्टार अभिनेतृ भएका कारण उनकै स्वास्थ्यको ख्याल राख्दै यो सुझाव दिएकी हुँ अन्यथा नलिनु होला । पुरा पढ्नुहोस्
जसले दु:ख पचाउँछ ऊ नै शक्तिशाली मानिस हो
म नम्रताको साहसको प्रशंसा गर्छु (डिप्रेसनबाट तङ्ग्रिँदै) । वास्तममा उनी बलियो ह्दय भएकी महिला हुन् । जसले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आफूलाइ सम्हाल्छ, ऊ सराहनाको भागिदार हुन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
रेश्मा, अझ अघि बढ्नु, खुसी मिलोस्
साप्ताहिक संवाददाता , मंसिर २२, २०७५
पटक–पटक सत्तामा बसेका, मुलुककै नेतृत्व गरिसकेका थुप्रै नेतालाई फेरि पनि किन कुर्सीको मोह ? (समय सन्दर्भ : वृद्ध नेतृत्वले थलिएको देश) अब युवाका समस्या बुझ्न युवाहरू नै देशको नेतृत्वमा आउनुपर्छ । पुरा पढ्नुहोस्